. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ၂၀၀၉ ခုနှစ် အာဇာနည်နေ့ သတိရခြင်း
(၁၉-၀၇-၀၉) နေ့ (၆၂) နှစ်ပြည့် အာဇာနည်နေ့
နှစ်ပေါင်း ကြာရှည်နေပေမယ့် မြန်မာလူမျိုးတွေ အနေနဲ့ အာဇာနည်နေ့ကို အမှတ်ရနေတတ်ခဲ့ကြတယ် .. သတိရတိုင်းလည်း ၀မ်းနည်းမှု နှမြောတသမှု ယူကြုံးမရမှု ဆုံးရှုံးခံလိုက်ရမှု စတဲ့ ခံစားမှုတွေ ရောပြွန်းလျှက် .. ကျမတို့ အလင်းတိုင် ဆုံးရှုံးခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ဒီလောက်တောင် ရှိသွားခဲ့ပြီ ..
ငယ်စဉ်ကတည်းက မေကြီးက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ပြောပြတတ်ခဲ့တယ် .. အတွင်းဝန်ရုံးရှေ့က ဖြတ်တိုင်းလည်း ဒီရုံးကြီးမှာပေါ့ .. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံခဲ့ရတာ .. ဘယ်လို ၀င်ရောက်လုပ်ကြံသွားတာ စသည်ဖြင့် ပြောပြတတ်တယ် .. အဲဒီချိန်ကတော့ ကြားရတိုင်း လုပ်ကြံခံရတယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံလောက်သာ ခံစားခဲ့ရတယ် .. အရွယ်ရောက်လို့ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းတွေ သိလာခဲ့ရတော့ လေးစားချစ်ခင်မိသလို နှမြောတသလည်း ဖြစ်ရတယ် .. ဗိုလ်ချုပ်ကို လုပ်ကြံခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း ရွံရှာ မုန်းတီးတတ်ခဲ့တယ် ..
မေကြီးက ဗိုလ်ချုပ်ကို သိပ်ချစ်တယ် .. ဗိုလ်ချုပ်ပုံနဲ့ ပိုက်ဆံ ကြီးငယ်တွေကို ခုထိသိမ်းထားတတ်တယ် .. စုထားတတ်ခဲ့တယ် .. ပိုက်ဆံပေါ်က ဗိုလ်ချုပ်သွင်ပြင်ကလည်း ခံညားစွာ နေရာယူခဲ့တယ် ..
ဗိုလ်ချုပ်ကို လူတိုင်းက ချစ်ကြတယ် .. (အချို့က လွဲရင်ပေါ့ ..) လူတန်းစားပေါင်းစုံရဲ့ ချစ်ခင်လေးစားမှုကို ခုချိန်တိုင် ခံစားနေရတုန်း .. အမြဲတမ်းလည်း အမှတ်ရနေတတ်ကြတယ် .. ဒါဟာ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် ထားရှိခဲ့တဲ့ စိတ်ရင်း စေတနာကြောင့်သာ တန်ပြန်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေလို့ ကျမယုံကြည်မိတယ် ..
တချို့ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အရေးပါမှုကို ပျောက်ကွယ်စေချင်စိတ်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အမှတ်တရတွေကို ကွယ်ပျောက်အောင် ပြုလုပ်နေကြတယ် .. လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကို အပြင်ကနေ ခြံစည်းရိုးခတ်လိုက်တာကို တွေ့ရတယ် .. အရင်ကလို ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ရှေ့တည့်တည့်က ၀င်လို့မရအောင် အသေပိတ်လိုက်တာ တွေ့ရတယ် ..
သနားမိတယ် .. ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သက်မဲ့ရုပ်ထုကိုတောင် ကြောက်ရွံ့နေကြသူတွေကိုပါ .. အမှတ်တရတွေကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ..
ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိ လူတိုင်းရင်ထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ် ရှိနေခဲ့တယ် .. ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အရှိန်အ၀ါကြီးတာကိုတော့ ဘယ်သူမှ ငြင်းမရပါဘူး ..
ဒါတွေကိုသာ သိနိုင်မယ်ဆိုရင် တာဝန်မကျေဘူးလို့များ ခံစားနေရမလား .. တကယ်တော့ တာဝန်ကျေသူတွေ ကျေကုန်ကြပါပြီ .. ကျမ အပါအ၀င် တာဝန်မကျေသူတွေသာ တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေဖို့ ကြိုးစားရမှာ မဟုတ်ပါလား ..
စဉ်းစားကြည့်စေချင်တယ် .. ကိုယ် လုပ်နေတဲ့အလုပ်က ဘာလဲ ..
ရှက်တတ်စေချင်တယ် .. ကိုယ် အခုရောက်နေတဲ့ အဆင့်က ဘာလဲ ..
ဒီကဗျာလေးက ငယ်စဉ်တည်းက သိခဲ့ မှတ်ခဲ့ ရွတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ကဗျာလေးပါ ..
ဗိုလ်ချုပ်သမိုင်းကြောင်း ဘလော့ တခုမှ ဒေါင်းလုတ် လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 7/19/2009 02:45:00 AM
အကြောင်းအရာခွဲ ခံစားချက်, အမှတ်တရ